Wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mudug – SBC
Wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mudug
Wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay deegaanka Dhagtuur ee gobolka Mudug ee ay saaka ka qarxeen dagaalo ayaa sheegaya in dagaalkaasi uu iskiis galabta u istaagey, iyadoo ay ishorfadhiyaan maleeshiyaadkii ku diriray deegaankaasi.
Dagaalkii maanta oo ahaa mid aad u culus ayaa tirada dadka ku dhintey waxaa la xaqiijiyey inay gaarayso 31 qof halka 58 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo u badnaa maleeshiyaadkii dagaalamayey oo ka soo kala jeeda beelaha dega degmada Cadaado ee gobolka Galguduud & Koonfurta Magaalada Gaalkacyo.
Ugu yaraan 23 qof oo dhaawac ah ayaa galabta maqribkii waxaa la xaqiijiyey in la gaarsiiyey Isbitaalka degmada Cadaado, iyadoo dadka dhaawaca ah qaarkood ay qabaan dhaawacyo halis ah, sidoo kale Isbitaalada Koonfurta magaalada Gaalkacyo waxaa galabta la keenay 20 qof oo dhaawac ah kuwaasi oo qaarkood dhaawac halis ah qaba.
Dagaalka maanta ayaa galabta joogsadey waxaana caawa degan deegaanka lagu dagaalamay mana jirto wax xabad ah oo socota balse waxaa laga cabsi qaba in dagaalku uu dib u bilowdo beri maadama ay wali is horfadhiyaan maleeshiyaadkii dagaalamay, mana jirto cid dhexdhaxaadin ugu kacdey qaboojinta xiisadah dhiigu ku qubtey.
Wararka SBC ay ku helayso Isgaarsiinta ayaa sheegaya in gurmadyo ciidan ay ka kala baxeen deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka isku haybta yihiin dhinacyada dagaalamaya, iyadoo dhiilo iyo xiisado colaadeed laga dareemayo deegaanada Baxdo, Cadaado, Docoley, Iidoole, Godinlabe, Galinsoor, Bandiiradley, Qaydaro, Gaalkacyo, Lugu-raqsey & deegaano kale.